EEBBA AKKOOKOO ANGARAASHEE-Lataa Qana’ii Aagaa’tiin – Beekan Guluma Erena
EEBBA AKKOOKOO ANGARAASHEE-Lataa Qana’ii Aagaa’tiin	Beekan Guluma Erena
Education May 17, 2016May 17, 2016OROMO
103SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
Eebba akkoo koo Angaraashee!
Waaqni lubbuu ishee jannata haa galchu malee akkoon koo Angaraasheen waggaa shan dura yommuun yuunivarsiitii deemuuf ka’u, “yaa mucaa koo jabaadhu, rabbi eebichas dammas si haa dhugsiisu’’ naan jette. Yeroo sana homaa natti hin fakkaanne, ‘Ameen’ jedheen fudhadhe. Booda garuu gaafan taa’ee yaadu na aarse, ‘eebicha si haa dhugsiisu jechuun maal jechuudha, akkamittan eebicha dhugaa? Ihim..’ jedheen gumgumee callise.
Akkasiin otoon jiruu guyyaa lamaa booda immoo gara magaalaa Naqamteen deeme. Haasaa keenyarratti, Naqamteen magaalaa guddoo godina Wallaggaa Bahaa yoo taatu magaalaa kana guyyaa itti deeman malee guyyaa itti keessaa ba’anii deeman beekuun hin danda’amu – sababa hanqina konkolaataa jechuu kooti. Magaalattii keessaa baatee bakka biroo deemuu yoo barbaadde guyyaa lama yookiin sadii dursitee tikeeta murachuu qabda; isayyuu taa’umsa dhumaa malee taa’umsa gara fuulduraan argadha jettee atuu hin yaadiin! Taa’umsa gara fuulduraa kana eenyutuu akka qabatee fi yoom akka qabate waardiyyoota qofatu beeka naan jedhan. Konkolaataan tarree galee dhaabatu kun hundi maal taanaan yeroo hunda rakkinni akkasii akka uumamu immoo naman gaafadhu dhabeen dhiise.
Otuman Naqamteen jiruu guyyaa 3ffatti hiriyyoota abbaa koo keessaa tokko kan ture nama ‘Dhinsaa’ jedhamu argeen waliin mana shayii deemne. Anis haasaa keessa dhimma eebba akkoo koo Angaraashee isa isheen “eebichas si haa dhugsiisu” jette sana kaaseen itti hime. Innis mataa raasee “eebba sirriidha’’ naan jedhe. ‘Akkamitti’ jedheen gaafadhe. “Eebichi ni hadhaa’a, dammi immoo ni mi’aawa; eebicha yoo dhamdhamtee hin argiin mi’aan dammaa homaa sitti hin fakkaatu. Jireenya kee keessa qorumsi, rakkinnis, gaaffiinis jiraachuu qaba. Yoo kana hunda keessa qaxxaamurtee nama taate jireenyi kee sitti mi’aawa, yoos hammam akka geessus barta” naan jedhe. Jireenya koo keessatti rakkina arguu waanan hin feeneef yaadasaa kana itti amanee hin fudhanne garuu jireenyi rakkinni keessa hin jirre hiika akka hin qabnen hubadhe.
Fedhiin namaa namaaf hin guutiin gaafa hafu keessi namaa ni miidhama, abdiin namaas ni cooliga. Waan qabanii fi waan gadhiisantu nama jalaa bada…! Garuu namnis takka takka fedhii ‘unreasonable’ ta’e qaba. Otuu ‘bicycle’ hin hoofiin xiyyaara hoofuun fedha jedhee haasa’a. Yeroo tokko barsiisaatu otoo barattoota afur daree keessatti barsiisaa jiruu ‘maal ta’uu barbaadduu? Jedhee gaafate. Barataan inni jalqabaa harka baasee ‘dooktara ta’uun fedha’ jedhe. Inni 2ffaas harka baasee ‘ dooktara ta’uun fedha’ jedhe. Inni 3ffaanis ka’ee ‘ dooktera ta’uun fedha’ jedhe. Dhumarratti barsiisaan sun barataa isa 4ffaadhaan ‘ati hoo maal ta’uubarbaaddaa?’ jennaan baratichis ‘dhukkubsataa ta’uun barbaada’ jedhe. Barsiisaanis ‘maaliif?’ jedhee gaafannaan, barataan sunis deebisee ‘dooktarri sadan kun eenyuun yaaluree yoo dhukkubsataan hin jirre?’ jedhee deebiseef!….
Lataa Qana’ii Aagaa’tiin
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa103SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← “FAYYAA AWWAALAN…!!”-Musxafaa Harawwee…Saphaaloo Kedir
-FAYYAANUU QABEENYA!-Dhinsaa Yoonaasii’n →